Kirsty Coventry Zimbabwe Sports Minister Clean Up In Harare 3
Nzvimbo dzakawanda dzasara dzakachena mushure mekunge mutungamiriri wenyika, VaEmmerson Mnangagwa, makurukota avo, nhengo dzeparamende nevemabhizimisi, vabatana neveruzhinji mukuchenesa nzvimbo dzavanoshandira nekugara pasi pechirongwa cheNational Clean-Up Campaign icho chakaparurwa mwedzi mitatu yapfuura.
VaMnangagwa vafumira kuchipatara cheParirenyatwa nemakurukota avo vakabatsira kutsvaira nzimbo dzine tsvina pahipatara ichi.
Vachitaura vapedza kuchenesa pachipatara apa, VaMnangagwa vati chirongwa ichi chiri kufarirwa uye chakanaka chose sezvo chichiita kuti vanhu vave nehutano hwakanaka.
Vati vakaparura zuva iri senzira yekuyeuchidza vanhu kuti ndizvo vanofanira kugara vachiita zuva nezuva.
VaMnangagwa vatiwo vanhu vanofanira kusiyana nemweya wekurasa marara pese pese uye vanofanira kudzidza kubva kunyika dzakaita seRwanda uko kusisabvumirwe vanhu kupfirira dzimba neuswa kana kufamba vanhu vasina kupfeka shangu.
Gurukota rezvemitambo, Muzvare Kirsty Coventry, nevashandi vemubazi ravo, vatanga kutsvaira muna Simon Muzenda Street vakazopedzesera muAfrica Unity Square umo vatsvaira pamwe nevashandi veMeikles Hotel neTM Supermarket.
Vatiwo veruzhinji vashamisika kuvaona vari mumugwagwa vachitsvaira uye vanhu vanofanira kugara vachichenesa nzvimbo dzavanogara.
Vashandi vekambani yeZimbabwe Newspapers vapindawo mumigwagwa yakapoteredza muzinda wekambani iyi uye kambani iyi yatengawo mabhini ikaisa mumigwagwa iyi kuitira kuti vanhu varasire marara.
Mutauriri weZimpapers, Muzvare Beatrice Tonhodzayi, vaudza Studio 7 kuti tsvina yanyanya munharaunda yavanoshandira ndosaka vaona zvakakodzera kubatana nehurumende mukuchenesa guta nenyika.
Vatiwo vashandi vekambani iyi kumahofisi ayo ari mumatunhu ese munyika, vapindawo muchirongwa cheNational Clean-Up Campaign nhasi.
Meya veHarare, VaHebert Gomba, makanzura eguta, nevashandi vekanzuru vatsvairawo nekunonga marara mumisha yakasiyana siyana muHarare.
Vachitaura neStudio 7 mushure mekutsvaira marara nevashandi veOK Machipisa panzvimbo yemabhizimisi yeMachipisa muHighfields, VaGomba vati vafara nekubuda kwaita vanhu nhasi vachiti guta ratombochenawo.
Vati kunyange hazvo basa rekuchenesa guta richida kuti vanhu vaite mushandirapamwe, kanzuru yavo iri kuedza pese painogona napo kuitira kuti guta rigare rakachena.
VaMnangagwa vakaparura zuva iri, iro rinocherechedzwa chishanu chekutanga mwedzi wega wega senzira yekuti vanhu vagare vakachenesa nzvimbo dzavanogara pamwe nekuti vave nehutano hwakanaka.